Qaxootiga Malmö oo xalay bannaanka ku hoydey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxooti badan oo banaanka ku hoydey. Foto: Anton Kalm/Sveriges Radio
Qaxootiga Malmö oo xalay bannaanka ku hoydey
La daabacay fredag 20 november 2015 kl 15.16
Magalaada Malmö qaxooti badan ayaa xalay banaanka ku hordey oo seexday, kaddib markii Hey’adda socdaalka Migrationsverket ay qaxootigan u weydey hooy.
Hey’adda Migrationsverket ayaa horey uga dhawaajisay xiryahii qaxootiga in ay buuxdhaafeen oo qaxootiga waddanka soo gaarayana aan boos loo heynin. Qaxootiga xalay banaanka hore xarunta Migrationsverket ku leedahay magaalada Malmö ku hordey waxay u badnaayeen rag. Weriye ka tirsan laanta P4 Malmöhus Anton Kalm oo aruurtii hore ee jimcaha gaaray goobtas ayaa ku soo arkay rag 30-meeyo gaaraya oo ku duuduuban busteyaal kuwaas oo xalay ku hordey dibadda xarunta Migrationsverket.
Xalay oo dhan roob ayaa da’ayey hawadana waxay aheyd mid qaboow badan.
– Wax cunto ah ma aanan helin ayuu yeri Nasretullah oo dhawaan ka soo galay dalka Afghanistan. Musqusha xataa waa noo diiden, ayuu yeri.Hal todobaad ka hor ayuu Nasretullah ka yimid dalka Afghanistan, habeynadii hore hey’adda socdaalka ayaa hotell seexisay laakiin hadda waxaa loo sheegay in hoteelkii buuxsamay boosna loo heynin.
Qoysaska caruurta wata iyo dumarka ayey hey’adda socdaalku ahmiy doorbiday in ay u hesho hoy halka markii sariirihii goobaha qaxootiga buuxsameen Nasretullah iyo rag kaloo badan banaanka ku soo dhaceen.